First Flight of F-16 Advanced Aggressor Fighter Now Completed | Wire News
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Yekutanga Ndege yeF-16 Yepamberi Aggressor Fighter Zvino Yapedzwa
Top Aces Corp. nhasi yazivisa kubhururuka kwekutanga kwakabudirira kweyekutanga F-16 Advanced Aggressor Fighter (F-16 AAF) ine muridzi wayo Advanced Aggressor Mission System (AAMS). Iyi tekinoroji yakaomesesa inoita kuti ndege yeTop Aces idzokorore hunyanzvi hwepamberi hwevapikisi vemazuva ano vemhepo-kumhepo. Nekupedzwa kwendege yekutanga yekuyedza, iyo F-16 AAF ikozvino ichaita nhevedzano yeakasimba ekuita bvunzo zviitiko mukugadzirira kupinda kwayo mukushandira neUnited States Air Force.
Inofambiswa neyakavhurika sisitimu yekuvaka, AAMS inobvumira kukurumidza kubatanidzwa kwema sensors uye mabasa ayo mutengi anoshuvira kushandisa kuvandudza kugadzirira kwavo kurwa kwemhepo. Semuyenzaniso, nhasi sisitimu yakasimudzwa ne:
• Tactical datalink kutaurirana pakati pendege nemamwe masangano;
• Infrared Search and Track (IRST) masisitimu;
• High Fidelity Weapon Simulation inobvumira kudzokorora kwakaringana kwemaitiro emhandu;
• Advanced Electronic Attack pod basa uye passive RF yekuona kugona; uye
• Mutsara wezvishandiso zvine hungwaru zvinobatanidza masisitimu ari pamusoro apa kuti ape huwandu hwezvazvinoita vavengi.
Iyo AAMS inomiririra makore mana ekutsvagisa nekusimudzira basa neTop Aces mainjiniya uye tekinoroji shamwari Coherent Technical Services, Inc. (CTSi) yeLexington Park, MD. Gore rapfuura, iyo AAMS yakatenderwa kushandiswa paTop Aces 'zvikepe zveA-4N Skyhawks uye parizvino iri kushanda neGerman Armed Forces uye nevamwe vatengi vekuEurope kudzidziswa kwepamusoro nendege. Ikozvino iyi imwecheteyo dhizaini yemamishini sisitimu yakaiswa paTop Aces 'F-16A ndege neM7 Aerospace yekuSan Antonio, TX, kambani yeElbit Systems yeAmerica ine ruzivo muKugadzirisa, Kugadzirisa uye Kugadziridza ndege (MRO).
Yepamusoro Aces inoronga kukwidziridza ruzhinji rweayo F-16 zvikepe neiyo pasi-inopwanya AAMS tekinoroji mukati megore rinotevera.
"Paunosanganisa simba neavionics yeF-16 neAAMS, inopa mhinduro yechokwadi uye inodhura inowanika kune vatyairi vanobhururuka varwi vechizvarwa chechishanu, seF-22 kana F-35", anodaro. Russ Quinn, Mutungamiriri weTop Aces Corp., murwi wemakore makumi maviri nematanhatu weUSAF uye aimbove mutyairi wendege Aggressor ane anopfuura 26 F-3,300 maawa ekubhururuka.
"Nekuda kweiyo plug-uye-kutamba yeAAMS yedu, inobvumirawo kuwedzerwa kwema sensors matsva uye ari kubuda mune ramangwana, izvo zvinopa mukana wekusimudzira maF-16 edu uye kusangana nezvinodiwa neAir Force kwemakore. kuuya,” vanowedzera VaQuinn.
New Acute Kurapa kweMigraine
Fraport iri kuongorora zvakanyanya kuRussia ...
Ongororo Itsva yeUS Kuti Unzwisise Zviri Nani Mutero Wakavanzika we...
Ghana iyo itsva World Center yeBold Solutions pa...
New Michelin Guide Malta 2022 Inozivisa 4th Bib...